Umzimveliso weAlloys Bar, iCobalt ingxubevange Bar, intsimbi engenanto, Titanium ingxubevange Bar - Sekonic Metals Technology Co., Ltd.
I-Sekonic Metals eziphambili zivelisa kwaye zibonelela nge-alloys bar kunye nentonga enjenge-Inconel bar, i-Monel bar, i-Hastelloy bar, i-Cobalt esekwe kwi-alloys bar kunye nentonga enje ngeHaynes bar, i-Stelle bar ect, kunye ne-Titanium alloy bar, imivalo ekhethekileyo yentsimbi. ngaphezulu kweminyaka engama-20.
Iimilo zebar: Ibha ephathekayo, ibha ejikelezayo, ibha yesikwere, ibha yeHexagon
Imeko umphezulu: ibha emnyama, ipolishiwe okanye ibha eqaqambileyo
Lobukhulu: Nawuphi na ubungakanani ukusuka kwi-1/5 intshi ukuya kwi-intshi ye-14 okanye i-6.0mm ukuya kwi-350mm
Ubude: Ubude Random, okanye Sika ubude ngaphakathi 6000mm
Ubukhulu bonyamezelo: H9, H10, H11, okanye njengemigangatho kunye nezivumelwano
Unyango lobushushuIsisombululo sihlonyelwe, ubudala baba lukhuni, ukuzenzela kwangaphambili
Iimveliso zeSekonic eziphambili zeMveliso kunye nokuNikezela ngokulandela iiAlloys neeBhari
I-Nickel esekwe kwiiAlloys-Inconel neeBhari
I-Inconel neeBhari zizicelo zenkqubo yokuFudumeza ubushushu, ioyile kunye negesi, isikuta semuffles, umvelisi womphunga Ect. Ezi alloys zikulungele kakuhle ukwenza kwimithombo yeendaba ezigabadeleyo. Xa kufudunyezwa, u-Inconel uvela kwimaleko enamatheleyo ukukhusela umphezulu wayo ekuhlaselweni nangakumbi.
I-Nickel esekwe kwiiAlloysIibhari zeIncoloy
Amandla aphezulu eIncoloybars amelana nokusetyenziswa kobushushu obuphezulu apho intsimbi kunye nealuminium zithambekele ekuthambekeni ngenxa yemingxunya yekristale ephucukileyo. Imivalo ye-Incoloy igcina ukuqina kwayo kunye nokumelana nemida kwiqondo eliphezulu lobushushu eliphezulu.
I-Nickel esekwe kwiiAlloys-Imivalo kaMelonel
Imivalo ye-Monel ngamandla ayo aphezulu kunye nokuchasana nokubola okuphezulu kulungele usetyenziso lwaselwandle nakwimizi-mveliso
I-Nickel esekwe kwiiAlloys-IiHastelloy neeBhari
Imivalo ye-Hastelloy ibonelela ngokudibana okuhle nokubola kwimeko-bume eyomeleleyo, enje ngeemeko ze-welding zenkqubo yeekhemikhali ezininzi. Umzi mveliso wokufaka ezi bhari kubandakanya - ioyile kunye negesi, indawo yokufudumeza ubushushu, umgubo nephepha, ikhemikhali ect.
Umzimveliso Based Alloys, Precsion Alloys, neeBhari Special Stainless, Titanium ingxubevange neeBhari
Enye imivalo yoLungiso lweeNgcaciso ezizodwa kwiMilo yokujikeleza, intonga, iflethi, isikwere ziyafumaneka ukukunika ngexabiso elifanelekileyo, ukuhanjiswa okukhawulezileyo.
Bolt kunye namandongomane
IHastelloy / Inconel / invar / iialloys ezithambileyo zemagneti / iiAlloys zeTitanium
Ubushushu obuPhezulu beMithombo
Flanges kunye nezibophelelo